Gbọ njem Bourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris na Porto na Wizz Air maliteghachi na Budapest
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Gbọ njem Bourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris na Porto na Wizz Air maliteghachi na Budapest
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Bulgaria • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ na -agbasa na Greece • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'enweghi asọmpi, Wizz Air weghachitere njikọ Budapest na Zakynthos na Sọnde, na-esonye ọrụ ndị ọzọ na ngwụcha izu na Brussels Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, na Porto.
Otu ihe ama ama ama ama ama bụ ụzọ mbụ Hungary gafere na Bulgaria.
Wizz Air meghere njikọ ugboro abụọ kwa izu na Bourgas, Bulgaria nke abụọ kachasị ukwuu na ụsọ Oké Osimiri Ojii.
Wizz Air nwere ike ịkwalite ọnụọgụ ụgbọ elu dị ka mgbochi na njem na mbido Budapest na-ebelata.
Wizz Air maliteghachiri ọrụ asaa ọzọ Ọdụ ụgbọ elu Budapest na ngwụcha izu gara aga, na-agbasawanye ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu nke Europe na-enye ndị ahịa nhọrọ nhọrọ njem ọzọ. Otu nlọghachị ama ama ama ama ama bụ ụzọ izipu ụzọ nke Hungary na Bulgaria, ebe onye na - ebu ọnụ ala (ULCC) meghere ugboro abụọ kwa izu maka Bourgas, obodo nke abụọ kachasị ukwuu na mba n'ụsọ Oké Osimiri Ojii.
Na-echeghị asọmpi, Wizz Air weghachiri njikọ Budapest na Zakynthos na Sọnde, sonye na ngwụcha izu ndị ọzọ bidoro ọrụ na Brussels Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, na Porto.
Balázs Bogáts, Onyeisi nke Airline Development, na Budapest Airport kwuru, sị, "Ọ dị mma ịlele n'izu ahụ n'izu anyị nwere ike ịkwalite ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu anyị ebe ọ bụ na mmachi mgbochi na njem na mbido Budapest na-ebelata." "Ọnụ ọgụgụ nke ebe ndị na-alọghachi na map anyị na-abawanye na n'oge na-adịghị anya, a ga-enyekwa obodo ndị bụ isi na EU niile ka anyị na-atụ anya iwebata EU Green ID."
N'ịga n'ihu na nwughari ya na Budapest, ma na-ekwenye na ọtụtụ mmụba na-abawanye n'ofe ụzọ map ya, na ngwụcha July Wizz Air ga-efega ebe 50, na-arụ ọrụ 148 kwa izu nke ga-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oche 31,000 kwa izu site na isi obodo Hungary.
Wizz Air, nke etinyere n'ụzọ iwu dị ka Wizz Air Hungary Ltd. wee mee ya dị ka W! ZZ Air, bụ ụgbọ elu ndị Hungary nke nwere ọnụ ala na isi ụlọ ọrụ ya na Budapest. Linegbọ elu ahụ na-eje ozi n'ọtụtụ obodo gafee Europe, yana ụfọdụ ebe ọ na-aga North Africa na Middle East.
Budapest Ferenc Liszt International Airport, nke a na-akpọbu Budapest Ferihegy International Airport na nke a na-akpọkarị Ferihegy, bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na-eje ozi na isi obodo Hungary Budapest, yana nnukwu ọdụ ụgbọ elu azụmahịa anọ nke mba ahụ.
Rod Stewart na-eme emume ncheta afọ iri nke obibi ya na The Colosseum na Caesars Palace na Las Vegas
Longzọ mgbake na-echere njem azụmahịa